Wada jir ah ula Ciise, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waa sidee xaaladda nololeed ee aad hadda ku sugan tahay? Ma qabtaa culaysyo nolosha ku murugiya oo murugada qabaa? Miyaad isticmaashay awoodaada oo aad naftaada ku riixday ilaa xad waxa aad sameyn karto? Noloshaada, sida aad hadda la kulanto, ayaa ku daalay, in kasta oo aad u xiisaynayso nasasho qoto dheer, ma heli kartid wax. Ciise wuxuu kuugu yeerayaa inaad u timaadid isaga: «Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow. Waxaan rabaa inaan ku qanco. Harqoodkayga dushooda ku qaata oo wax iga barta; maxaa yeelay, waan qalbi qaboobaa oo qalbi libaax; oo naftiinna nasashaad u heli doontaan. Maxaa yeelay, harqoodkaygu waa mid jilicsan, oo rarkayguna waa fudud yahay (Mt 11,28-30). Muxuu Ciise nagu amrayaa inaan sameyno dalabkiisa? Wuxuu ka hadlayaa saddex shay: “Ii kaalay oo harqoodkayga dushaada saar oo wax iga barta”.
Ciise wuxuu nagu martiqaadayaa inaan u nimaadno oo ku noolaano hortiisa. Wuxuu noo furayaa albaab aan ku horumarno xiriir dhow oo aan la yeelano isaga. Waa inaan ku faraxsanaano inaan la joogno oo aan la joogno. Wuxuu nagu martiqaadayaa inaan is barbar dhigno isaga oo aan si aad ah isaga u baranno - si aan ugu faraxsanahay inaan isaga u aqoonno oo aan ku aaminno cidda uu yahay.
Harqoodkayga dushiinna ku qaata
Ciise wuxuu dhegeysigiisa u sheegayaa ma aha oo kaliya inay isaga u yimaadaan, laakiin sidoo kale inay harqoodkiisa qaataan. Ogsoonow in Ciise uusan ka hadlayn oo keliya 'harqoodkiisa', laakiin wuxuu sharraxay in harqoodkiisu yahay "culayskiisa" sidii ay ahayd. Harqoodku wuxuu ahaa miis alwaax lagu dhejiyay oo qoorta loo sudhay laba xayawaan, badiyaa dibi, si ay markaa isugu soo jiidaan alaab badan. Ciise wuxuu si cad u muujinayaa farqiga u dhexeeya culeyska aan horay u qaadnay iyo kuwa uu ina saaray inuu qaado. Harqoodku annaga ayaa nagu xidhma oo waxaa ku jira xidhiidh cusub oo dhow. Xiriirkani waa qeyb ka mid ah socodka ee wadaagga iyo xiriirka isaga.
Ciisena nooguma yeerin inaan ku biirno koox weyn. Wuxuu rabaa inuu ku noolaado xiriir laba-geesood oo shakhsiyadeed oo annaga noo ah kaas oo ah mid dhow oo dhammaan jira si aan u nidhaahno waxaan isaga ugu xidhan nahay sidii harqood!
Qaadidda harqoodkii Ciise micnaheedu waa in nolosha oo dhan lala wadaago. Ciise wuxuu noogu yeedhaa xiriir dhow, joogto ah, xiriir firfircoon kaasoo aqoonteenna ku saabsan isaga ay ku koreyso. Waxaan ku koray xiriirkan midka aan kula xirnahay harqoodka. Markaan harqoodkiisa galnayno, iskuma dayno inaan kasbanno nimcadiisa, laakiin waxaan ku koraynaa inaan ka aqbalno isaga.
Wax iga barta
U oggolaanshaha Ciise inuu kugu hoos jiifa harqoodka micnaheedu maahan ka qeyb qaadashada shaqadiisa, laakiin sidoo kale inaad wax ka barato isaga xiriirka aad la leedahay adiga. Muuqaalka halkan ku yaal ayaa ah mid wax barta oo ku xiran Ciise, kaasoo indhihiisu si buuxda diiradda u saarayaan halkii ay ka socon lahaayeen dhinac uun oo wejigiisa hortiisa ka muuqanaya. Waa inaan la soconaa Ciise oo aan had iyo jeer ka fikirnaa aragtideena iyo tilmaamaheena xaggiisa. Ahmiyadda si weyn culeyska kuma saarno, laakiin midka aan ku xirannahay. La noolaanshaha isaga waxaa loola jeedaa inaan wax badan ka baranno isaga oo si dhab ah u aqoonsanno qofka uu runtii yahay.
Qurux iyo iftiin
Harqoodkii Ciise na siiyay waa mid jilicsan oo wanaagsan. Meel kale oo Axdiga Cusub dhexdiisa ah waxaa loo adeegsadaa in lagu sharraxo nooca Ilaahay iyo falalka naxariista leh. Waxaad dhadhamisay in Rabbigu naxariis leeyahay (1 Butros 2,3: 6,35). Luukos wuxuu sharraxayaa Ilaah: "Isagu waa u roon yahay kuwa aan mahad naqin iyo kuwa sharka leh" (Luuk. XNUMX).
Culayska Ciise ama harqoodkiisu sidoo kale waa “fudud”. Kani waa erayga ugu adag ee halkan lagu isticmaalo. Miyaan culays lagu qeexin wax culus? Hadday khafiif tahay, sidee culeys u noqon karaa?
Culayskiisu ma fududaan, waa mid fudud, iyo iftiin maxaa yeelay waxaa jira culeys ka yar midka aan qaadi karno, laakiin waa taas annaga, xagga ka-qaybqaadashadeena xiriirka jacaylkiisa, kaasoo ah xiriirinta Aabbaha.
Isagoo wada qaadanaaya harqoodkan isla markaana ka baranaya wixii Ciise noogu sheegay, wuxuu nasiinaa nasasho. Si tan loo xoojiyo, Ciise ayaa fikirkan ku soo celiyay laba jeer, iyo markii labaad oo uu yidhi waxaan heli doonnaa nasasho "nafteenna". Fikradda nasashada ee Kitaabka Quduuska ah ayaa si ka durugsan u hakineysa shaqadeena. Wuxuu ku dhisayaa figradda Cibraaniga ee Shalom - Shalom waa ujeedka Eebbe ee dadkiisu inay ku helaan barwaaqo iyo wanaag iyo inay ogaadaan wanaagga Eebbe iyo jidadkiisa. Ka fikir arintaas: Muxuu Ciise doonayaa inuu siiyo kuwa uu ugu yeedhay? Bogsashada nasashada naftiinna, nasasho, wanaag caafimaad qab.
Waxaan taas ku soo gunaanadi karnaa culeyska kale ee aynnu sidnay haddii aynaan u imaanin Ciise runtii waxay naga dhigayaan kuwo daallan oo ha naga tagin. In aan la joogno oo aan wax ka barano isaga waa nasashada Sabtida, taas oo gaareysa qalbiga qofka aan nahay.
Is-hoosaysiinta iyo is-hoosaysiinta
Sidee bay u tahay jilicsanaanta Ciise iyo is-hoosaysiinta u saamaxday inuu na siiso xasilloonida maanka? Muxuu Ciise si gaar ah muhiim ugu yahay? Wuxuu leeyahay xiriirka uu la leeyahay aabaha waa mid dhab ah oo bixiya isla markaana xiriir ah.
Wax walbaba waxaa laygu soo wareejiyey aabbahay, oo qofna wiilka ma yaqaan wiilka mooyee, oo keliya aabbaha keliya. oo qofna aabaha garan maayo laakiin wiilka keliya iyo cidda uu wiilku doonayo inuu u muujiyo »(Mt 11,27:XNUMX).
Ciise wax walbuu ka qaatay aabaha maxaa yeelay aabaha ayaa isaga siiyay. Wuxuu ku tilmaamay xiriirka aabaha inuu yahay xiriir iskaashi, shaqsiyeed iyo is-yaqaannaan. Xiriirkani waa mid gaar ah - ma jiro qof aan ahayn aabaha mooyee wiilka sidaan u yaqaan mana jiro cid aan ahayn wiilka mooyee aabaha sidani sidan u ogaado. Xiriirkooda dhow iyo weligiis wuxuu muujinayaa is aaminaad.
Sidee ayuu ciwaankii Ciise ee naftiisa u naxariis badan yahay oo is-hoosaysiiyay ula xidhiidhay sharaxaadda xidhiidhka uu la leeyahay aabihiis? Ciise waa “aqbalaha” ka hela midka uu aad ugu yaqaan. Kaliya maaha inuu u sujuudo dusha sare ee doonista aabaha inuu bixiyo, laakiin wuxuu si deeqsinimo ah u siiyaa wixii la siiyey isaga. Ciise wuu ku faraxsan yahay inuu ku noolaado deganaanshaha taas oo ah sababta oo ah waxa uu kula wadaagaa aabaha xagga ogaanshaha, jacaylka iyo xidhiidhka.
Ciise si firfircoon ayuu had iyo goor ugu xidhan yahay Aabaha hoostiisa, xiriirkani weligiis wuu jiray. Isaga iyo aabuhu waa xidhiidh dhab ah oo ka dhexeeya bixinta iyo qaadashada. Injiilka Yooxanaa, Ciise wuxuu sheegayaa in uu sameeyo oo keliya oo yiraahdo waxa uu arko oo maqlo oo kugu amro Aabbaha inuu sameeyo. Ciise waa is-hoosaysi iyo qabow maxaa yeelay wuxuu ku xidhan yahay aabihiis jacaylkiisa aaminka ah.
Ciise wuxuu yidhi kuwa keliya ee yaqaan Aabbaha waa kuwa uu isagu doorto inuu u muujiyo. Wuxuu u yeerayaa dhamaan kuwa garanaya inay shaqaal yihiin oo culays saaranyihiin. Wicitaanku wuxuu tagayaa dhammaan dadka shaqeeya iyo culeys saaran, runtii qof walba ayuu saameeyaa. Ciise wuxuu raadinayaa dad diyaar u ah inay wax helaan.
Ciise wuxuu noogu yeerayaa "culeys isweydaarsiga". Amarka Ciise ee ah in la yimaado, la qaato oo wax laga barto isaga ayaa tilmaamaya amarka in la iska daayo culeyska aan u nimid isaga. Waxaan u dhiibnaa oo u dhiibnaa isaga. Ciise nama siiyo culayskiisa iyo harqoodkiisa si aan ugu daro culeyskeena iyo harqoodkeenna hadda jira. Isagu ma bixiyo talo ku saabsan sida aan culeyskeenna ugu qaadi karno si hufan ama wax ku ool ah si ay ugu muuqdaan kuwo fudud. Isagu nama siinayo garbihiisa garbaha si markaas xadhkaha xamuulku culeyska noogu riixdo si aan xadidneyn.
Maaddaama Ciise noogu yeerayo cilaaqaad gaar ah oo lala yeesho isaga, wuxuu naga codsanayaa inaan ku wareejino wax kasta oo culeys nagu ah. Markaan isku dayeynno inaan wax walba nafsadeena qaadno, waxaan illownaa cidda Ilaah yahay oo waxaan joojineynaa inaan fiirino Ciise. Dhegeysan mayno isaga oo aan illaawayno inaannu naqaanno. Culayska aannaan dulsaarin waxay ka soo horjeedaan waxa Ciise na siinayo.
Ciise wuxuu xertiisii ​​siiyey amar ah "inay ku sii jiraan" sababta oo ah waxay yihiin laamihiisa oo isaguna waa canabka. «Igu jir, anna anna waan kugu jiraa Sida canabku midho u dhali kari waayo, haddaanu geedkii canabka ku joogsan karin, sidaas oo kale haddii aadan igu sii jiri karin. Anigaa ah geedka canabka ah, idinku waxaad tihiin geedcanabkii canabka ahaa. Kii igu jira oo anna aan ku jiro, midho badan dhala; maxaa yeelay aniga la'aanteed waxba ma aad samayn kartid ”(Yoon 15,4: 5-XNUMX).
Ciise wuxuu kuugu yeedhay inaad qaadatid harqoodkan yaabka leh ee nolol-maalmeedka ah maalin walba. Ciise wuxuu ku dadaalayaa inuu noo suurto geliyo inaan inbadan ku noolaano nabad gelisa maskaxdiisa, maahan kaliya markaan ognahay inaan u baahan nahay. Marka si aan u wadaagno harqoodkiisa, wuxuu na tusi doonaa waxbadan oo aan xirxirayno, waxa runtii abuura daal, kana horjoogsanaya inaan ku noolaano nabad.
Waxaan u maleyneynaa inaan qaadan karno harqoodkiisa goor dambe ka dib markii aan xaaladda wax ka qabanno oo waxyaabihii ay xasilloonaayeen. Ka dib marka loo habeeyo, goorta ay ficil ahaan u habboon tahay in lagu noolaado oo loo muujiyo meel aan ku ilaalin karno xasilloonideena maalinlaha ah.
Ciise waa wadaadka sare
Markaad culaysyadaada oo dhan Ciise ku wareejiso, xusuusnow inuu isagu yahay wadaadkayaga. Isaga oo ah wadaad sare oo weyn, wuxuu mar horeba ogyahay culayska oo dhan wuuna qaatay oo innaga daryeelay. Wuxuu qaatay nolosheena jabtay, dhibaatooyinkayagii oo dhan, halganka, dembiyada, cabsida, iwm, oo wuxuu ka dhigay isaga qudhiisa inuu naga bogsado gudaha. Aamin kartaa isaga. Waa inaadan ka baqin wareejinta: culaysyo duug ah, dagaallo cusub, yaryar, wax culus waxaad mooddaa culays yar ama kuwa umuuqda kuwo aad u weyn. Isagu waa diyaar oo had iyo goor aamin buu ku yahay - adigu waxaad xidhiidh la leedahay isaga iyo aabihii, dhamaantiin ruux ahaan.
Hannaankani wuxuu caado u leeyahay inuu si buuxda ugu xidho Ciise - kana leexato, nolosha cusub ee nasashadiisa - ayaa sii socota oo sii xoojisa noloshaada oo dhan. Ma jiro dagaal hadda socda ama ka dambeeya ama walaac ka sii kordhaya oo ka badan kan wicitaankan adiga kuu muuqda. Muxuu kuugu yeedhay? Isaga, inuu nolosha la wadaago, deganaantiisa. Waa inaad tan la socotaa markaad qaadatid oo aad sidatid rar xumo. Waxaa jira hal culeys ah oo keliya oo laguugu yeeray inaad qaado isla markaana waa Ciise.
Waxaa qoray Cathy Deddo